Ebe ọ bụla FM. Otu esi emepụta akaụntụ na Anywhere.FM iji gee egwu gị n'ebe ọ bụla | Akụkọ akụrụngwa
Aọ bụla FM bụ ngwa dị na ntanetị nke ị nwere ike bulite mkpokọta egwu gị niile iji gee ya mgbe e mesịrị site na ebe ọ bụla ị nwere njikọ Internetntanetị. Usoro dị oke mfe. Create mepụta akaụntụ, n’ime naanị ụzọ atọ, ma bido bulite egwu gị na ya Ebe obula.FM, mgbe ahụ ị nwere ike ige ya ntị site na ntanetị ọkpụkpọ sitere na otu weebụsaịtị ahụ na-enweghị ịwụnye ihe ọ bụla na kpamkpam n'efu. Ọrụ a ka nọ na oge beta, ya bụ, ọ dị na nnwale ma ewepụtabeghị ụdị nke ikpeazụ, mana ugbu a enweghị nsogbu mara mara na ị na-arụ ọrụ nke ọma.
ATupu anyị ahụ otu esi mepụta akaụntụ na bulite egwu na Anywhere.FM ka anyị hụ ihe ole na ole ị ga-ebu n'uche:
N’ebe obula FM emeputara gi na Flash 9 n'ihi nke a ọ naghị arụ ọrụ nke ọma na sistemụ arụmọrụ Linux. Na nso nso a Adobe eweputala ụdị nke Flash 9 maka Linux mana ụdị a anaghị arụ ọrụ ọfụma ọ bụ ezie na ọ na - enye gị ohere igwu egwu ndị echekwara na Anywhere.FM ọ naghị ekwe ka ibugo faịlụ na ngwa ahụ. Ya mere ọ bụrụ na ị chọrọ bulite gị songs na Anywhere.FM ị ga-eme ya site na sistemụ arụmọrụ nke zuru oke dakọtara na Flash 9.
E nweghị ịgba na-ebugote songs, ma ọ dịkarịa ala maka ugbu a na mgbe ụdị Beta na-adịgide. N'ọdịnihu, enwere ike ịbelata ma ọ bụ kwuo ọnụ ọgụgụ nke ebugote maka akaụntụ adịchaghị (nke nwere ikike karịa).
Gaghị enwe ike ibudata egwu ị bulitere na Ebe ọ bụla FM, naanị kpọọ ya, Dị ka ihe atụ, ige egwu kachasị amasị gị site na ọfịs gị naanị site na ijikọ na www.ebuka.njk ma tinye akaụntụ gị.
Ebe ọ bụla FM bụ n'efu. Dịka m kwuru na ngalaba gara aga, ikekwe n'ọdịnihu ha ga-akwụ ụgwọ maka iji akaụntụ adịchaghị na nke ewepụtara na a ga-aga n'ihu na-abụ nnabata ego anaghị akwụ ụgwọ mana yana ụfọdụ mmachi (dịka ọnụọgụ bulite).
Ebe ọ bụla FM dị n'asụsụ Bekee, mana ọ dị oke nfe iji. Anyị ga-ahụ n’ikpeazụ na ịmata ihe okwu ole na ole pụtara ga-eme ya.
Ebe ọ bụla FM na-akwado egwu MP3, ya mere oburu na inwere egwu n’udi ozo, dika wma ma obu WAV, igha gha tọghata ha ka ha bulite ha. Nwere ike iji a onye ntụgharị ntanetị iji gbanwee isiokwu gị site na otu usoro gaa na nke ọzọ.
BỌfọn, ọ bụrụ na ahụhụ ahụ atụọ gị, ka anyị hụ otu esi emepụta akaụntụ ma bulite egwu gị site na akwụkwọ ntuziaka a dị ntakịrị:
Nke 1) Ihe mbụ bụ ịga ebe obula.fm. Mgbe ibe ya mepere, windo nnabata ga-aputa (Nnabata na ebe ọ bụla.FM) nke ha na-agwa gị maka isi ọrụ atọ nke Ebe ọ bụla FM ndị bụ:
Na-agbago gị dum music collection («Bulite gị dum music collection»)
Kpọọ ya ebe ọ bụla nwere ọkpụkpọ egwu weebụ kachasị mma ("Gwuo ya ebe ọ bụla na egwu ọkpụkpọ weebụ kachasị mma")
Choputa egwu ohuru site na Redio Amigas ("Choputa egwu ohuru site na Redio Enyi").
Nke 2) Pịa bọtịnụ na-acha anụnụ anụnụ nke na-ekwu "Nwee obi ụtọ!" (nke pụtara "Enwe Mmasị!") Imechi windo nnabata wee lee bọtịnụ edo edo "Debanye aha" na akuku aka nri aka nri nke windo ebe FM bụla.
Nke 3) Pịa na bọtịnụ a ka ịmepụta akaụntụ ma windo ga-emeghe nke ị ga-abanye aha njirimara ị ga-eji na Anywhere.FM na paswọọdụ (paswọọdụ). Ọ dị ezigbo mkpa na ị na-ege ntị mgbe ị na-ede paswọọdụ gị, ebe ọ bụ na ndekọ adịghị amanye gị ka ị dee ya abụọ na ọ bụrụ na mgbe ị na-ede paswọọdụ ị mehiere mgbe ahụ ị gaghị enwe ike ịbanye n'ihi na ọ gaghị ama paswọọdụ gị i mechara dee. Yabụ họrọ aha njirimara na paswọọdụ ma dee ya ka ị ghara ichefu, ebe ọ bụ na ị gaghị anata ozi-e na ncheta paswọọdụ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri ya.
Mgbe itinyere aha gị na paswọọdụ gị, pịa bọtịnụ "Mepụta" iji mepụta akaụntụ gị.
Y na i meworị akaụntụ gị. Ugbu a ka anyị lee kedu ka anyị ga-esi bulite ụfọdụ egwu ịge ntị ma emechaa site na ebe ọ bụla nwere ịntanetị site na Ebe ọ bụla FM.
Nke 1) Pịa bọtịnụ «Bulite» («Bulite») na akuku aka nri ala.
Mpio na-esote ga-emepe aha ya bụ "Họrọ faịlụ ndị a ga-ebujuru na www.anywhere.fm" yana aha ya na-egosi na ya, anyị ga-ahọrọ faịlụ egwu anyị chọrọ bulite na Anywhere.FM, cheta na ọ bụ naanị na-akwado MP3 yabụ gbalịa bulite faịlụ na usoro ọzọ karịa nke a.
Nke 2) Mgbe ịhọrọ faịlụ ndị ahụ, pịa bọtịnụ "Mepee" na bulite ga-amalite. Na onyonyo ndị a ị ga - ahụ etu etu ọnọdụ mbugo si gosipụta na ogwe na-acha anụnụ anụnụ nke gosipụtara n’okpuru na pasent aka nri.
Nke 3) Mgbe emechara mp3s niile ka ị bulite, ị ga-enwe ike ịhụ ha n'akụkụ etiti nke ọkpụkpọ weebụ web nke Anywhere FM.
BỌ dị mma, ọ bụ ya, naanị ị ga-ahọrọ egwu ịchọrọ igwu ma pịa bọtịnụ Play. Na nkuzi ga - eme n’ọdịnihu, anyị ga - ahụ usoro site n’usoro otu anyị ga - esi mee ka abụ anyị nwee ike ịkekọta ha, etu esi agagharị na Anywhere.FM iji mara egwu ndị ọrụ ndị ọzọ na - ege ntị ma ọ bụ otu esi ahazi onye ọkpụkpọ anyị ka ọ gbanwee ọdịdị ya, n’etiti ọtụtụ ihe ndi ozo. Ruo oge ahụ, enwere m olileanya na nkuzi nkuzi nke a bara uru maka gị. Ubi Vine.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Ebe ọ bụla FM. Otu esi emepụta akaụntụ na Anywhere.FM iji gee egwu gị n'ebe ọ bụla
Nnọọ! You ma ma ọ bụrụ na ọkpụkpọ egwu egwu ahụ etinyere na blọgụ anyị ma ọ bụ weebụsaịtị anyị?
Daalụ! = D